Waa kuma ninka ay dartiis u kulmi rabaan Biden iyo Maxamed Bin Salmaan oo isku dhacsan? | Xaysimo
Home War Waa kuma ninka ay dartiis u kulmi rabaan Biden iyo Maxamed Bin...
Waa kuma ninka ay dartiis u kulmi rabaan Biden iyo Maxamed Bin Salmaan oo isku dhacsan?
Madaxweynaha Mareyknaka, Joe Biden iyo Dhaxal sugaha Boqortooyada Sacuudiga, Maxamed Bin Salmaan, ayaa laga yaabaa in ay markii ugu horraysay kulan yeeshaan bisha soo socota, sida uu tebiyay telefishinka CNN oo soo xiganayay ilo wareedyo kala duwan.
Maamulka Biden ayaa wadahadal kula jira saraakiisha boqortooyada si loo diyaariyo kulanka fool ka foolka ah ee labada hoggaamiye, kaasoo dhici doona inta uu Biden dibadda uga maqan yahay Mareykanka.
Aqalka Cad ma uusan xaqiijinin arrintan balse sidoo kale ma uusan beenin.
Laakiin telefishinka fadhigiisu yahay Mareykanka ayaa sheegay in Madaxweyne Biden iyo Wiilka uu dhalay Boqorka Sacuudiga ay ka wada hadli doonaan arrimaha ku saabsan nin lagu magacaabo Sacad Al-Jabri.
Waa kuma ninka ay dartiis u wada hadlayaan Madaxda Mareykanka iyo Sacuudiga?
Sacad bin Khalid Al-Jabri, waa janaraal hore oo Sacuudi ah, sidoo kalena soo noqday wasiirka arrimaha dowladda Sacuudiga.
Muddo dheer ayuu ahaa la taliyaha Dhaxal Sugihii xilka laga qaaday ee boqortooyada Sacuudiga, Maxamed bin Nayef.
Balse waxa uu tan iyo 2017-kii ahaa siyaasi baxsad ah oo dibadda ku nool, dowladda Sacuudiguna waxay doonaysay in loo soo gacan geliyo. Sacad waxa uu hadda ku sugan yahay dalka Canada, balse Sacuudiga waxaa uga socda dacwad ku saabsan eedeymo musuqmaasuq.
Haddii ay is arkaan Biden iyo MBS waxay noqonaysaa markii ugu horreysay ee ay kulmaan tan iyo markii la doortay Madaxweynaha Mareykanka, labo sano ka hor.
Xiriirka Washington iyo Riyaad ayaa xumaa tan iyo markii uu Mareykanku taageerada kala noqday dagaalka uu isbahaysiga Sacuudiga ka wado Yemen, sanadkii lasoo dhaafay.
Sidoo kale sirdoonka Mareykanka ayaa soo saaray xog Maxamed Bin Salmaan la xiriirinaysa dilkii Jamaal Kaashuqji oo lagu khaarijiyay gudaha Turkiga, tallaabadaas oo sababtay in ay isku sii xumaadaan labada dal.